Duulimaadyadii tagi jiray deegaannada Hirshabelle oo la hakiyay – HalQaran.com
Duulimaadyadii tagi jiray deegaannada Hirshabelle oo la hakiyay
Jowhar (Halqaran.com) – Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo dhammaanba duulimaadyada yimaada Deegaanada Hirshabelle.
Digreeto saqdii dhexe xalay ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Hirshabelle ayaa si rasmi ah loogu sheegay in la hakiyo gaadiidka dhinaca cirka ee tagga Hirshabelle.
“Anagoo tixgelinayno xaaladda caafimaad ee deg-degga ah uu wadanka ku jiro, gaar ahaan Dowlad Goboleedka Hirshabelle, waxaan hakinay dhammaan duulimaadyada rayidka ee soo aada Dowlad Goboleedka Hirshabelle. Sidaa daraadeed waxaan idinka codsaneynaa inaad naga talo gelisaan duulimaadyada soo dalbada codsi gaar ah.” Ayaa lagu yiri digreetada.
Sidoo kale, waxaa digreetada lagu cadeeyay inaanay Hirshabelle aqbali doonin in ay iska yimaadaan duulimaadyo aan fasax haysan.
Ugu dambeyn, sida digreetada lagu sheegay amarkani wax saamayn ah kuma yeelan doono duulimaadyadii arrimaha bani’aadanimo, oo sidoodii hore ayay u socon doonaan.
Tags: Duulimaadyada deegaanada Hirshabelle, faafida cudurka Coronavirus, ka hortagid, la hakiyay
PM delivers address on COVID-19 impact to Somalia
Wariye Gurbiye oo si xun lagula dhaqmay Xabsiga dhexe ee Xamar & Wararkii ugu dambeeyay